Hyperstake စျေး - အွန်လိုင်း HYP ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Hyperstake (HYP)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Hyperstake (HYP) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Hyperstake ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
HYP – Hyperstake
Market ကဦးထုပ်: $115 705.00
volume_24h_usd: $3 595.85
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Hyperstake တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Hyperstake များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
HyperstakeHYP သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000822HyperstakeHYP သို့ ယူရိုEUR€0.000697HyperstakeHYP သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00063HyperstakeHYP သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00075HyperstakeHYP သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00743HyperstakeHYP သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00519HyperstakeHYP သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0183HyperstakeHYP သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00308HyperstakeHYP သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0011HyperstakeHYP သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00115HyperstakeHYP သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0184HyperstakeHYP သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00637HyperstakeHYP သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00447HyperstakeHYP သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0616HyperstakeHYP သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.139HyperstakeHYP သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00113HyperstakeHYP သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00124HyperstakeHYP သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0257HyperstakeHYP သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00573HyperstakeHYP သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.087HyperstakeHYP သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.977HyperstakeHYP သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.318HyperstakeHYP သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0606HyperstakeHYP သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0228
HyperstakeHYP သို့ BitcoinBTC0.00000007 HyperstakeHYP သို့ EthereumETH0.000002 HyperstakeHYP သို့ LitecoinLTC0.00001 HyperstakeHYP သို့ DigitalCashDASH0.000008 HyperstakeHYP သို့ MoneroXMR0.000009 HyperstakeHYP သို့ NxtNXT0.0589 HyperstakeHYP သို့ Ethereum ClassicETC0.000118 HyperstakeHYP သို့ DogecoinDOGE0.233 HyperstakeHYP သို့ ZCashZEC0.000009 HyperstakeHYP သို့ BitsharesBTS0.0314 HyperstakeHYP သို့ DigiByteDGB0.0285 HyperstakeHYP သို့ RippleXRP0.0028 HyperstakeHYP သို့ BitcoinDarkBTCD0.00003 HyperstakeHYP သို့ PeerCoinPPC0.0027 HyperstakeHYP သို့ CraigsCoinCRAIG0.368 HyperstakeHYP သို့ BitstakeXBS0.0345 HyperstakeHYP သို့ PayCoinXPY0.0141 HyperstakeHYP သို့ ProsperCoinPRC0.101 HyperstakeHYP သို့ YbCoinYBC0.0000004 HyperstakeHYP သို့ DarkKushDANK0.259 HyperstakeHYP သို့ GiveCoinGIVE1.75 HyperstakeHYP သို့ KoboCoinKOBO0.184 HyperstakeHYP သို့ DarkTokenDT0.000757 HyperstakeHYP သို့ CETUS CoinCETI2.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 08 Aug 2020 22:55:02 +0000.